Toa mahasalama kokoa ny hatsarana avy amin'ny natiora
Fikarakarana voajanahary hatrany an-doha ka hatrany amin'ny rantsantanana
Resipeo: kosmetika voajanahary ho an'ny trano
Manaova kosmetika salama
Ny kosmetika voajanahary dia miaro amin'ny fanapoizinana
Miseho ny miketrona
Ny hatsarana avy amin'ny natiora dia vita amin'ny akora voajanahary amin'ny endrika kosmetika voajanahary. Ireo dia tsy miantoka ny fahatsapana fiadanam-po fotsiny, fa tsy mampidi-doza koa noho ireo akora ampiasaina. Ny faniriana hanana fomba fiaina ekolojika, maharitra ary mahasalama dia mitombo mandrakariva, ka izay no mahatonga ny tarehy makiazy voajanahary lasa malaza sy malaza hatrany.
Ahoana no ahalalanao ny tarehy fanosotra voajanahary?
Fanatsarana tarehy voajanahary -. © Dan Race / Adobe Stock
Ny kosmetika voajanahary dia tsy voafaritry ny lalàna ary noho izany dia tsy misy tombo-kase mitovy amin'ny kalitao. Betsaka ny marika voajanahary voaforon'ny indostria izay mamitaka raha ny amin'ny fividianana.
Rehefa nandeha anefa ny fotoana dia nisy tombo-kase azo antoka sasany nipoitra. Ireo vokatra ireo dia vokatra voajanahary avy amin'ny fambolena ny akora ka hatramin'ny fanodinana. Noho izany dia azonao atao aloha ny mamantatra ny tarehy fanosotra voajanahary amin'ny tombo-kase. Saingy indrisy, tsy misy tombo-kase iray monja. Manasarotra kely azy io.
Na izany aza, azonao atao ny mieritreritra fa ny akora rehetra ampiasaina amin'ny vokatra misy tombo-kase dia avy amin'ny natiora. Ny tavy, savoka, menaka, loko ary hanitra dia tsy azo atao afa-tsy amin'ny mineraly, legioma ary, ankoatra ny vitsivitsy, ireo akora biby. Fady fatratra ny parafin, silika, andrana biby ary taratra radioaktifa.
Ny kosmetika ara-dalàna dia misy akora miasa hormonina mety hiteraka voka-dratsy ary koa aretina. Ireo akora ireo dia tsy mampaninona amin'ny fatra ekena. Saingy milaza ny mpitsikera fa tsy fantatrao ny fihetsiky ny akora amin'ny vokatra hafa ampiasaina. Ireo akana mampiady hevitra ireo dia voarara amin'ny fanaovana tarehy voajanahary. Fa na ny kosmetika voajanahary aza indraindray dia misy menaka esansiela mety hiteraka allergy. Tsy misy olona afaka manaporofo raha tsara kokoa ny tarehy fanatsarana tarehy na tarehy tsotra.
Vokatra cosmetika voajanahary isan-karazany
Amin'ny kosmetika voajanahary dia misy ny vokatra rehetra fantatrao sy ilainao. Anisan'izany ny fikarakarana tarehy sy maso, fikolokoloana volo, makiazy ary lokomena, fanadiovana vatana, savony, fanosotra tanana, fikolokoloana masoandro ary maro hafa.
Ny hoditsika manokana dia mila fikirakirana tsara sy fikarakarana malefaka. Izy io dia iharan'ny fitaomana manimba tontolo iainana isan'andro. Mitroka ny otrikaina rehetra ny hoditra ary mampita izany ao anaty vatana. Ny zavatra kosmetika dia misy akora simika mety hanimba ny hoditra. Ny kosmetika voajanahary kosa dia manohana sy mamelombelona ny hodintsika ary mahatonga azy io ho tsara tarehy sy malama. Mialà amin'ny hatsaranao avy amin'ny natiora. Ny kosmetika voajanahary dia malaza be amin'ny fanomezana ary zavatra manokana.
Ny fatiantoka kosmetika voajanahary
Tsy dia hahita mascara maharitra na tsy tantera-drano amin'ny tarehy kosmetika voajanahary ianao. Ho very maina ihany koa ny hijerenanao menaka fanosotra amin'ny masoandro miaraka amin'ny singa mpiaro ny masoandro mihoatra ny 20 na ny lokomena mamirapiratra. Ny gel mando sy shampoos zara raha misy foam sy hairsprays dia tsy azo aparitaka tsara. Ny silika sy vovoka koa dia miharatsy kokoa indraindray. Ny loko volo voajanahary koa dia misy fatiantoka, ny volo fotsy dia tsy hanjavona tanteraka ary zara raha azo atao ny mandoko ny volo maivana kokoa.
Mihabetsaka ny mpanjifa maniry ny fikolokoloana ny hoditra voajanahary ary mitodika any amin'ny vokatra kosmetika organika. Ny hodintsika dia tia karakaraina moramora ary raha azo atao dia avy amin'ny akora voajanahary. Orinasa maro izao no manolotra kosmetika voajanahary ary mitohy ny fironana.
Fikarakarana voajanahary amin'ny menaka voanio
Ny menaka voanio dia manankarena ary tena mando. Tena mety amin'ny fikolokoloana volo. Amin'ny maha-fitsaboana volo voajanahary azy dia azo ampiharina amin'ny volo izy rehefa atsonika. Mba handrendahana azy dia afaka mifanosika amin'ny tananao ianao. Ny tsara indrindra dia avela hilona ao anaty volonao mandritra ny adiny vitsivitsy ny menaka voanio. Arakaraka ny faharetan'ny fotoana ialana, ny hatsaran'ny fikarakarana aorian'izay.
Rehefa avy mandaitra dia tsy maintsy hosasana tsara tanteraka ny volo amin'izay tsy mahatsiaro menaka intsony. Ny volo mamirapiratra sy malalaka voajanahary no ho vokatr'izany. Ny fananana manalefaka dia tsy azo ampiasaina amin'ny volo fotsiny, fa ny hoditra koa mahazo tombony amin'izany. Ny toetra mampiavaka ny bakteria dia fantatra sy sarobidy amin'ny fikarakarana. Ny menaka voanio dia azo ampiasaina amin'ny vatana iray manontolo. Ny tarehy, molotra, tanana, tongotra, ny vatana iray manontolo dia hahatsapa ho malefaka malefaka ary maimbo tsara aorian'ny fikarakarana. Ny ampahany amin'ny vatana izay maina indrindra dia lasa malemy sy malefaka indray. Ny iray dia tokony ho ara-toekarena amin'ny fampiharana ny menaka amin'ny hoditra menaka tarehy.
Ny menaka voanio dia vokatra fikarakarana voajanahary manomboka amin'ny loha ka hatrany amin'ny rantsantongony. Azo ampiasaina amin'ny vatana iray manontolo izy io, ka izay no antony be mpitia. Afaka mividy menaka voanio ianao amin'ny fivarotana sakafo ara-pahasalamana sy fivarotana zava-mahadomelina. Rehefa mividy dia tokony ho azonao antoka fa tsy misy additives izy io.
Body menaka fanosotra amin'ny hoditra
Ny fikolokoloana ny hoditra voajanahary dia matetika manomboka amin'ny menaka fanosotra amin'ny vatana. Ny menaka fanosotra amin'ny vatosoa voajanahary dia misy akora toy ny menaka soja, dibera shea ary menaka amandy. Ny hoditra dia omena ny hamandoana mandritra ny fotoana maharitra amin'ny alàlan'ny zava-maniry hamandoana miorina amin'ny zavamaniry. Ny otrikaina C sy E dia miantoka ny fikolokoloana mafy sy fiarovana ny hoditra tsara indrindra.
Raha maina be ny hoditrao dia tsara kokoa ny mampiasa menaka fanosotra amin'ny vatana.
Ny diberan'ny vatana koa dia nanaporofo ny tenany tamin'ny hoditra maina. Izy io dia misy menaka macadamia, izay mamelona ny hoditra ary mamatsy lipida ampy ny faritra maina. Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny akora ao anaty voninkazo filan'ny nofo dia entanina ny fifandanjan'ny hoditra ary arovana ny hoditra.
Ny fihodirana tsy ara-dalàna dia mila fihoaram-pefy tsy tapaka. Ho an'ny fikarakarana voajanahary, ny vokatra misy ahidrano samihafa, be pitsiny mineraly ao anaty ranomasina ary glycerine anana dia ampiasaina hifehezana ny hamandoana.
Ny fitsaboana voajanahary dia miha malaza. Loharanon'ny fahatanorana ho an'ny vatana sy ho an'ny hoditra izy io.
Tsy afaka mividy kosmetika voajanahary voaomana fotsiny ianao. Ny tsirairay dia afaka manamboatra tarehy voajanahary voajanahary ao an-trano mora foana. Amin'ny kosmetika voajanahary namboarina tao an-trano, azonao antoka tanteraka fa voajanahary ireo akora ampiasaina ary tsy misy akora simika ao aminy.
Resipeo amin'ny fikolokoloana tarehy voajanahary voajanahary
Ny sarontava tarehy dia azo atao haingana sy mora amin'ny fromazy sy tantely kely. Ny tanimanga manasitrana dia mety amin'ny hoditry ny tarehy koa. Ireo dia vita avy amin'ny tany tena manokana. Diovina, maina ary hafangaro amin'ny diloilo sy rano ity tany ity.
Ao an-trano dia azonao atao ny manetsiketsika rano 1 hatramin'ny 2 tablespoons amin'ny rano mandra-pahatongan'ny famafazana aparitaka. Ny tany dia zaraina mitovy amin'ny tarehy, manala ny loto sy loto amin'ny hoditra.
Aorian'ny fitsapana miharihary dia azonao atao ny manosotra ny saron-tava ary amin'izay dia mbola misy vokany lehibe amin'ny famelana. Raha manana hoditra marefo ianao, dia azonao atao ny manasa ny saron-tava amin'ny rano mafana. Ho an'ny fikarakarana aorian'ny sarontava tarehy, afaka mampiasa jojoba na menaka amandy ianao. Ny hoditrao dia hahatsapa ho malefaka mahafinaritra.
Ny fikosehana vatana dia vita haingana
Tsy mila fangaro betsaka amin'ny fikosehana vatana ianao. Makà kafe mangatsiaka telo sotro fihinanana, menaka amandy telo sotro fihinanana, menaka rongony na menaka oliva ary afangaro ao anaty pulp ity masaka ity Atsaharo amin'ny fivezivezena boribory malefaka ireto faritra ilaina amin'ny vatana ireto. Farany, sasao amin'ny rano matimaty be.
Ny tanana manokana no tena miady saina ary indrisy fa tsy raharahina ny ankamaroany. Azonao atao ny mamoaka rano feno tantely ireo tanana tapaka sy maina. Ny mila ataonao dia ny manampy tantely 1 ka hatramin'ny 2 tablespoons ao anaty lovia iray misy rano mafana ary afangaro. Atsofohy ao anatiny ny tananao mandritra ny 10 minitra dia kobanina amin'ny rano madio. Ny tantely dia vokatra voajanahary ary mamelona akora sarobidy ary koa misy fiantraikany amin'ny famonoana otrikaina.
Resipeo amin'ny fandroana fikolokoloana voajanahary voajanahary
Ny fandroana fahasalamana dia tsy vitan'ny hoe miala sasatra fotsiny, fa tena mahavelona koa. Azonao atao ny manomana fandroana fahasalamana ao an-trano miaraka amina singa vitsivitsy fotsiny. Ho an'ny fandroana fahasalamana dia ampio dibera iray kapoaka, menaka oliva kely ary tantely 1 ka hatramin'ny 2 tablespoons amin'ny rano fandroana. Azonao atao ny manampy rano indray mitete vitsivitsy amin'ny ratra manitra. Misaotra anao ny hoditrao.
Ny tongotrao koa dia mila fikarakarana sahaza.
Makà vilia iray miaraka amina rantsankazo rosemary vitsivitsy ary araraka aminy ny rano mangotraka. Avelao hiakatra izy mandra-pahatongan'ny mari-pana mety tsara amin'ny tongotrao. Aorian'ny fandroana tongotra dia tokony hosotra amin'ny crème manan-karena ny tongotrao.
Ny resipeo ho an'ny kosmetika voajanahary dia mora ary manaraka haingana. Mila kojakoja vitsivitsy fotsiny ianao izay manana ny ankabeazany ao an-trano. Tena mendrika izany ny fanandramana azy.
Ny fanaovana kosmetika ara-pahasalamana ho anao dia malaza ary miha mankasitraka bebe kokoa. Betsaka no manana olana amin'ny vokatra fikarakarana hoditra indostrialy satria izy io dia mety hiteraka aretin-koditra sy hoditra maina.
Tombony azo amin'ny kosmetika salama
Raha te hanamboatra tarehy tarehy ianao, dia manapa-kevitra samirery amin'izay akora ampiasainao. Ny fanaovana kosmetika salama ny tenanao dia mora kokoa noho ny vokatra novidina. Ny kosmetika vita an-trano ihany koa dia tia tontolo iainana.
Ny ankamaroan'ny resipeo dia misy akora biolojika toy ny anana, voankazo ary menaka. Ny vokatra fikarakarana isan'andro toy ny menaka, savony na shampoos dia afaka afangaro haingana sy mora aminao irery. Mazava ho azy fa tsy afaka mamokatra vokatra manokana toy ny crème anti-ketrona ianao ao an-trano, fa afaka manamboatra crème face amin'ny dingana vitsivitsy monja. Izany dia manome hamandoana sy tavy betsaka ary, amin'ny maha-sarontava tarehy azy, dia misy vokany mahavelona.
Fa maninona no tokony hasianao tarehy tsara tarehy?
Ny reny rehetra maniry ny hiainan'ny fianakaviany salama dia mitady akora voajanahary sy mahasalama rehefa miantsena. Na dia amin'ny kosmetika aza dia mihabe ny fanaovana azy io. Saingy zava-dehibe ihany io. Mitroka ireo akora ireo ny hoditra ary manome izany ho an'ny zavamiaina misy antsika, na inona na inona akora mahavelona na manimba. Ny vokatra kosmetika mahazatra dia tena manahirana ny olona manana hoditra marefo.
Mandany fotoana ny fikarohana fikarakarana sahaza. Ny ankamaroan'ny vokatra dia matetika no mampitombo ny olana fa tsy manatsara azy.
Ny fomba tsara indrindra hahitana ny vokatra mety aminao dia ny fanaovana izany amin'ny tenanao. Mba hahafahanao manao kosmetika mahasalama ny tenanao, dia singa vitsivitsy ihany no ilainao. Misy akora sasany ao an-trano aza.
Cosmetika azonao atao ho anao
Betsaka ny vokatra azonao atao ho an'ny tenanao. Ohatra, azonao atao ny manamboatra tarehy manokana toy ny menaka fanosotra, menaka fanosotra, menaka, fikolokoloana tarehy, fiarovana ny masoandro, balsama amin'ny molotra, fikolokoloana ny hoditra, fikolokoloana zaza ary maro hafa. Azonao atao mihitsy aza ny manamboatra soloina lena ho an'ny ankizy kely na amin'ny fanesorana makiazy. Ireo namboarina dia feno akora mahavelona, ​​mahasalama, ara-tontolo iainana ary mora vidy kokoa aza.
Ny fanaovana kosmetika salama ny tenanao dia midika hoe mampiasa tombony maro. Tombony iray dia ny fahafantaranao tsara izay akora ao amin'ilay vokatra. Izy io koa dia mora vidy kokoa noho ny vokatra novidina.
Ny kosmetika voajanahary dia tsara ho an'ny hoditsika ary feno akora tsara, fa maninona ny kosmetika voajanahary no miaro amin'ny taona?
Matetika, misy zavatra simika misy poizina maro amin'ny vokatra kosmetika. Izahay dia mifoka rano maloto, sakafo sy fitafiana ampy tsy ampy. Noho izany dia tokony hiezaka ny hisoroka ny poizina amin'ny kosmetika. Ny fifindrana amin'ny kosmetika voajanahary dia afaka manampy amin'ny fampihenana ny poizina amin'ny vatana.
Ireo akora simika manimba dia matetika ampiasaina amin'ny vokatra ho an'ny emulsification, preservation, flavour ary amin'ny savony hampitomboana ny vokatra famonoana otrikaretina. Misy akora simika izay misy vokany toy ny hormonina ao amin'ny vatana ary noho io antony io dia mety hanelingelina ny fifandanjan'ny hormonina ary hiteraka olana ara-pahasalamana. Ny simika dia afaka miditra amin'ny zavamiaina amin'ny alàlan'ny hoditra, izay amin'ny tranga ratsy indrindra dia mety hiteraka korontana amin'ny fitondran-tena, ny hatavezina, ny homamiadana ary ny diabeta.
Ny akora simika ao amin'ny kosmetika dia mety hanimba ny fahasalamana. Ny kosmetika voajanahary dia manohana ny vokatra mahavelona sy manasitrana. Miaraka amin'ny vitamina dia afaka misoroka sy mampihemotra ny fizotry ny fahanteran'ny hoditra.
Miaraka amin'ny kosmetika voajanahary dia tsy hahatsapa ho tanora kokoa ny olon-drehetra, fa ho tanora kokoa koa.
Rehefa milentika ny hoditra
Raha milentika ny hoditra dia mety ho mariky ny fahanterana. Misy fanafody voajanahary tsotra manohitra ny hoditra mihena. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy atsonika ny stearin amin'ny hafanana ambany ka hatramin'ny hafanana antonony, ampio triethanolamine ary atsimohy mandritra ny folo minitra. Rehefa somary nangatsiaka ny fangaro, dia ampio rano raozy vitsivitsy, glycerine, ranona voatabia ary ranom-boasarimakirana ary afangaro mandra-pahatonga ny crème.
Rehefa hita ny ketrona voalohany dia mazava ho azy fa te hanao zavatra momba azy ianao. Ny fitsaboana voajanahary dia afaka manampy amin'ny fisorohana ny fizotran'ny fahanterana tsy hanombohana izany amin'ny fomba matotra. Ny tantely, menaka aty cod, menaka amandy ary lanolin dia atsonika amin'ny hafanana ambany sy antonony. Afangaro amin'ny tsiranoka misy menaka raozy sy ranon-kôkômbra. Afangaro ny zavatra rehetra mandra-mangatsiaka. Miditra anaty vata fampangatsiahana mandritra ny 48 ora izao izy io. Ny crème dia tokony hapetraka amin'ny hariva alohan'ny hatory ary tokony hoentina mandritra ny alina. Ho hitanao ny fahasamihafana aorian'ny roa na telo herinandro fotsiny.
Ny kosmetika voajanahary dia miaro ny hoditra sy ny vatana amin'ireo akora simika ary manampy rehefa manomboka mihalevona ny hoditra ary manjary hita ny ketrona.
Perfume | fahadiovana manokana
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 18. Febroary 2021 15. Jolay 2021 Sokajy WellnessKeywords makiazy, toetra, voajanahary makiazy, natürliche Kosmetik
indray Lahatsoratra taloha: Saka toy ny biby fiompy
more Lahatsoratra manaraka: Mampianatra ny dia | Fialan-tsasatra sy fialan-tsasatra